Momba anay - Fengcheng Zhonghe Paper Products Co., Ltd.
Fengcheng Zhonghe Paper Products Co., Ltd no mpanamboatra fonosana fidiovana taratasy fidiovana sy vokatra taratasy hafa. Hatramin'ny niorenany tamin'ny taona 1999, ny Fengcheng Zhonghe Paper Products dia nitazona ny fivoarana haingana sy ny fanavaozana tsy tapaka, ary mankafy hatrany ny vokatra famokarana avo kokoa sy ny fizarana tsena lehibe kokoa. Fengcheng Zhonghe Paper Products dia orinasa voamarina ISO9001 sy ISO14001, ary nandany ny adit feno an'ny Bureau Veritas (BV) amin'ny resaka QSA, SER ary ny fiarovana.
Ny Fengcheng Zhonghe Paper Products dia nanangana ny fanaovana fanamboarana taratasy manokana, mifehy tsara ny kalitao avy amin'ny fanomezana. Tamin'ny taona 2018, nanangana zava-baovao ny tsipika famokarana mandeha ho azy izahay ary nanova ny fomba famokarana hatramin'ny famokarana milina mandeha ho azy. Ny famokarana automatique lehibe dia manome antsika ny fanomezana avo lenta kokoa, ny taratasy tsara kalitao ary ny vokatra ara-toekarena kokoa.
Fengcheng Zhonghe taratasy Products dia afaka mamokatra andian-dahatsoratra taratasy: sarona seza fidiovana 1/2 mivalona, ​​rakotra seza fivoahana 1/4 mivalona, ​​fonosana fidiovana fidiovana manokana, taratasy fonosana fonosana fidiovana, taratasy taratasy, lamba famaohana taratasy sy taratasy interleaving fitaratra, sns. Rafitra QC feno, mpiasa fanaraha-maso za-draharaha ary fitaovana fanandramana ampy hahatonga ny vokatra taratasinay ho afaka hihaona amin'ny famaritana kalitao henjana sy ny fenitra iraisam-pirenena. Ny taratasy fonosantsika fipetrahana dia nandalo ny fitsapana ny SGS, RoHS. Ny ankamaroan'ny vokatra an-taratasinay, indrindra ny fonony seza fidiovana dia alefa any amin'ny tsenan'i Etazonia sy Eropa.
Ny ekipa misy ny mpivarotra mivarotra sy ny satan'ny mpivarotra, ny masoivohon'ny varotra, ny mpitantana ny yacht, ny manampahaizana manokana momba ny varotra ary ny mpiasa dia samy manana ny filàzany tanteraka amin'ny fivoahana an-dranomasina ary manana traikefa sy fahalalana maro mihoatra ny olon-drehetra ao amin'ny indostria.